Mpg Player: Sida loo Play Mpg Files (Leopard Snow mid)
> Resource > Video > Mpg Player: Sida loo Play Mpg Files in Windows / Mac (Leopard Snow mid)
Haddii aad looma isticmaalo in lagu Mpg (ama MPEG) qaab file ah, in aad marka hore u leeyihiin in ay ogaadaan in waxa kaliya weel oo ay si caadi ah u kaydiyo MPEG-1 ama MPEG-2 videos ee codecs iyaga u gaar ah. On top of in, aan ciyaaryahan warbaahinta oo dhan ay awoodi karto in Radidiyaha file Mpg ah (ama MPEG) si guul leh. Haddii ciyaaryahan uu ku guuldareystay inuu Radidiyaha faylasha, ha ka welwelin. Waxaan qoray, sidee noqon doonaa in aad awood u sameeyo, iyadoo labo xal oo kala duwan; Qaybta 1aad diinta faylasha aad; ama Part 2 isticmaalka ciyaaryahan Mpg kala duwan.
Qeybta 1: Beddelaan files Mpg for loo maqli karo ee Mac / Windows
Qeybta 2: Play files Mpg ciyaartoyda Mpg ee Mac / Windows
Qeybta 1: Beddelaan files Mpg for loo maqli karo ee Mac (Leopard Snow mid) / Windows
An MPEG-1 waxaa inta badan loo isticmaalaa on a disc video CD (VCD), halka ah MPEG-2 waxaa badanaa loo isticmaalaa on DVD disc ah. Sida xaqiiqadu, waa wax aan caadi ahayn oo aan si aad naftaada u ogaato in sida diraynaa sababtoo ah codsiyada ugu badan ma yihiin kuwo aad taageero ah files Mpg. Taasi waa run gaar ahaan haddii aad tahay qof ku Mac. Si loo xaliyo dhibaatada, aad doonaa u badan tahay inuu ka soo leexdo aad caawimo dhinaca Converter file ah. The Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) gargaaree weyn. Waxay leedahay tiro balaadhan oo ah qaabab video saarka oo sidaas daraaddeed, waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo files Mpg si aad u qaab kasta oo aad rabto.
1. Jiid-iyo-hoos u files Mpg aad ka kombiyuutarka gal barnaamijkan. Haddii kale, riix Add Files badhanka si ay u dajiyaan faylasha.
2. Riix Qaabka Output iyo eegto qaabka wax soo saarka aad door bidayso ka menu hoos-hoos.
3. Riix badalo si loogu badalo files Mpg aad.
Qeybta 2: Play Mpg files ciyaartoyda Mpg ee Mac (Snow Leopard mid) / Windows
Guud ahaan, aad Windows Movie Player (WMP) awoodi doono inuu Radidiyaha aad MPEG-1 videos. Waxaa la mid ah, si kastaba ha ahaatee, ee MPEG-2 videos sabab u ah waa sireed kala duwan. Waxaad isku dayi kartaa inaad kala soo baxdo software ah si kor loogu qaado ilaa codecs ku taageerayaan in maktabadda WMP ee. Tani lama hubo in ay ka shaqeeyaan, inkastoo sida ay tahay waxay ku xiran tahay waafaqid oo ka mid ah ah iyadana ama surin-tago. Sida ciyaaryahanka QuickTime ku saabsan Mac, qaabka file Mpg hubaal ah ma aha kuwo la socon kara nidaamka Mac ka hawlgala. Haddii aad rabto in ay daawadaan MPEG-1 ama MPEG-2 videos, waxa aad helaysaa in ay maciinsadeen in ciyaaryahan kale oo warbaahinta ka duwan.
The Wondershare Player noqon kartaa Mpg ah ciyaaryahan ugu wanaagsan in aad u yimid oo dhan. Waa ciyaaryahan warbaahinta xorta ah iyo qaban karaa ku dhowaad nooc kasta oo ah video iyo files audio. Taasi oo ay ku jiraan labada MPEG-1 iyo MPEG-2 files. Waa shaki ku jirin doorasho ku haboon ama ciyaaryahan si Radidiyaha oo dhan ee aad files warbaahinta.
Download oo isku day cajiib ah, ciyaaryahankaan warbaahinta weli lacag la'aan ah hadda! Burcad barnaamijka dib markii la rakibey oo guji Open Files in interface ugu weyn ee ay doortaan file Mpg aad rabtid in aad ka ciyaari. Waxaad sidoo kale riixi kartaa F5 in la beddelo goobaha default ah ciyaaryahanka ugu. Waan hubaa in aad la yaabtaan si aad u ogaato in ay jiraan wax loo baahan yahay inay kala soo bixi ciyaaryahan oo kala duwan mar kasta oo qaab file ee leheyn. Ma aha in badan!
Top 20 Adobe jilitaankii tuuryo waxaad isticmaali doontaa Marka ayeey Video Files
Bilowga 'Tusaha MPEG Streamclip